Recruitment & Training Coordinator | GETC & NURTURE English Training Center
ရည်ရွယ်ချက်။	။သင်တန်းနှင့် ပတ်သတ်သည့် ကိစ္စအ၀၀တို့ကို အပြည့်အ၀ တာဝန်ယူ အကောင်အထည်ဖော် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲရန်။ ၀န်ထမ်းအတွက် Career Path စစ်ဆေးရွေးချယ်ပေးခြင်း၊ Career Planning၊Coaching နှင့် Supporting တို့ကိုအစမှအဆုံးအပြည့်အ၀တာဝန်ယူ စီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက်ရန်။
၁။	၀န်ထမ်းများအတွက် ၄င်းတို့၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးပင်ကိုယ်စရိုက်လက္ခဏာ၊ ၀ါသနာ၊ စိတ်ဝင်စားမှု၊ အားသာချက်နှင့် ကိုက်ညီသည့် Career Path ကိုရွေးချယ်ပေးခြင်း။ ရွေးချယ်ထားသည့် Career Path နှင့်ကိုက်ညီသည့် Career Plan ရေးဆွဲပေးခြင်း။ ရေးဆွဲထားသည့် Planအတိုင်း အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန်လိုအပ်သည့်ကိစ္စအ၀၀ကိုအပြည့်အ၀တာဝန်ယူကြီးကြပ်လမ်းညွှန်မှု ပေးခြင်းနှင့် လိုအပ်သည့်အကူအညီအားလုံးကိုပံ့ပိုးကူညီပေးခြင်း။
၂။	သင်တန်းတက်ရောက်အောင်မြင်သူများနှင့် အလုပ်ရှာဖွေပေးရန်အပ်နှံသူများကို သင့်တော်ကိုက်ညီ သော အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်ရှာဖွေပေးရန်။
၃။	လုပ်ငန်းရှင်များလိုအပ်သည့် ၀န်ထမ်းများကို ၄င်းတို့သတ်မှတ်စံချိန်စံနှုန်းနှင့်အညီ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရှာ ဖွေခန့်ထားခြင်း။
၄။	၀န်ထမ်း၏ရပိုင်ခွင့်လုပ်ခ လစာနှင့်အခြားခံစားခွင့်ကိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
၅။	သဘောတူစာချုပ်များချုပ်ဆိုနိုင်ရန်အတွက် ကြီးကြပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
၇။	သင်တန်းမှ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားမည့် သင်တန်းများ၊ ဆွေးနွေးပွဲများကို အထက်အရာရှိ၏ လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းအပြည့်အ၀ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
၈။	သင်တန်းအမျိုးအစားး စုံလင်စွာဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး၊ သင်တန်းသားများများရရှိရေး၊ အစ အလယ်အဆုံး အဆင်ပြေချောမွေ့ရေး စသည့်ကိစ္စရပ်များကို ကြိုတင်ပြင်ဆင် အစီအစဉ်ရေးဆွဲအကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
၉။	ထိရောက်သော သင်ကြားရေးနှင့် ၀န်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ခံဆရာ/မ၊ အတန်းပိုင်ဆရာ/မ၊ တာဝန်ခံဝန်ထမ်းများနှင့် လက်တွဲလုပ်ဆောင်၍လိုအပ်သည့် ကိစ္စအ၀၀တို့ကို တစ်ကြိမ်ထက်တစ်ကြိမ်၊ တစ်လထက်တစ်လ၊ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်စနစ်တကျ တိုးတတ်မှုရှိအောင် အဓိက နေရာမှ အပြည့်အ၀တာဝန်ယူ၊ တာဝန်သိစွာအကောင်အထည်ဖော်စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ အရေးယူနိုင်ရန် တင်ပြခြင်းနှင့်အရေးယူခြင်း။
၁၀။	မိမိဌာန စနစ်တကျတိုးတက်မှုရှိရေးအတွက် အဖက်ဖက်မှ ကြိုတင်ပြင်ဆင်၍ ရေတို၊ရေရှည် အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ အထူးသဖြင့် မိမိဌာနနှင့် လုပ်ငန်းတူပြိုင်ဖက်များကို အမြဲမပြတ် စောင့်ကြည့်လေ့လာ ခြင်းနှင့် လက်ဦးမှုရယူနိုင်အောင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း။
၁၁။	မိမိအဖွဲ့အစည်းအတွက် အထူးအရေးကြီးသည့် လူ့အရင်းအမြစ်များဖြစ်သည့် ထူးချွန်ထက်မြက်၍ အတွေ့အကြုံနှင့် အရည်အချင်းပြည့်ဝသော Trainer များရရှိရန် အမြဲမပြတ် အထူးတာဝန်တစ်ရပ်အနေဖြင့် နေ့စဉ်၊အပတ်စဉ်၊ လစဉ်၊ နှစ်စဉ် ကြိုတင်ပြင်ဆင်၍ စီမံကိန်းများ ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော် ရှာဖွေထိန်းသိမ်းခြင်း။
၁၂။	မိမိအဖွဲ့အစည်း၏ တိုးတက်မှု၊ အားနည်းချက်၊ အားသာချက်များကို အမြဲမပြတ် စောင့်ကြည့်လေ့လာ၍
၁၃။	မိမိတာဝန်ယူရသည့် အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ခန့်အပ်တာဝန်ပေးထားသည့် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ခံများနှင့် Trainerများမှ ၄င်းတို့ တာဝန်ယူ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရသည့် ကိစ္စရပ်များကို ညွှန်ကြားထားသည့်အတိုင်း သတ်မှတ်စံချိန်စံနှုန်းနှင့်အညီ ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်မှုရှိ/မရှိကို အမြဲမပြတ်စောင့်ကြည့်လေ့လာ အသိပေးခြင်း၊မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အရေးယူနိုင်ရန် တင်ပြခြင်း။
၁၄။	မိမိအဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် လက်အောက်ဝန်ထမ်းငယ်များ၏ လုပ်ရည်ကိုင်ရည် စနစ်တကျတိုးတက်မှုရှိရေးတို့ကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လေ့ကျင့်သင်ကြားပြသပေးခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်စည်းကမ်း လိုက်နာစေရေးနှင့် ၎င်းတို့၏အလုပ်တာဝန်များ ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်ရေးအတွက် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊ လူမှန်နေရာမှန်ဖြစ်အောင် စီမံခြင်း၊ အပတ်စဉ်၊ လစဉ် နှစ်စဉ်အကဲဖြတ် အမှတ်ပေးခြင်း၊ သတိပေးနိုင်ရန်နှင့် အလုပ်မှ ရပ်စဲနိုင်ရန် တင်ပြပေးခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ	လိုအပ်သည့် HR ပေါ်လစီများကို ရေးဆွဲ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်အောင် တင်ပြခြင်း။
၁၅။	ကျောင်းသားရေးရာနှင့် ပတ်သက်သည့်ကိစ္စအ၀၀တို့ကို ထိရောက်စွာတာဝန်ယူစီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ကျောင်းသား/သူများနှင့် အမြဲမပြတ်ထိတွေ့၍ ၎င်းတို့၏ မျှော်လင့်ချက်ပြည့်မီအောင် စီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက်ခြင်း။
၁၆။	သင်ကြားရေးနှင့်ပတ်သက်၍ လိုအပ်သည့် စာအုပ်၊ စာရွက်စာတမ်းနှင့် သင်ထောက်ကူပြုပစ္စည်းများ စသည်တို့ကို တာဝန်ယူစီစဉ်ဆောင်ရွက်၊ ကြပ်မတ်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ မိမိဌာနနှင့် သက်ဆိုင်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ အမြဲမပြတ် စစ်ဆေးထိန်းသိမ်းခြင်း။
၁၇။	ရက်တို/ရက်ရှည်ခရီးစဉ်များ၊ ဆုပေးပွဲ၊ ရန်ပုံငွေပွဲ၊ ဟောပြောပွဲ၊ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ၊ ဈေးရောင်းပွဲ၊ Party ပွဲ၊
၁၈။	အထက်ပါတာဝန်များအပြင် အထက်အရာရှိမှ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ ပေးအပ်သည့်တာဝန်များကို
•	ပညာရေး၊ ဈေးကွက်နှင့် စီးပွာရေးဆိုင်ရာ အထူးပြု မဟာဘွဲ့ရရှိထားသူဦးစားပေးမည်။
•	လူမှုဆက်ဆံရေးပြေပြစ်၍၊ဦးဆောင်နိုင်သူဖြစ်ပြီးသွက်လက်ဖျက်လက်၍လုပ်ငန်းပိုင်းတိကျသေချာသူဖြစ်ရမည်။ (Independent and self-driven team player with ability to multi-task.)
Rewards on over performance
GETC and NURTURE is one of the leading professional language schools and preschools in the city of Yangon, Myanmar. It is founded in 2007 andaprivately-owned organization with more than 200 staff members and6branches. We haveasolid and positive reputation in the city. Students and parents often say that it is the best school that give intensive care and provide High Quality English Language Teaching and Early Childhood Education.
HR COORDINATOR City Mart Holding Co.Ltd HR Manager ( Male Only ) MMTM (Myat Myittar Mon Co.,Ltd.) HR Manager TOP CAREER Myanmar/ Recruiting Service of Fourth Valley Concierge Co.,Ltd HR Manager (Region) Solar Home Myanmar Human Resource Manager Stream Net Co., Ltd Assistant HR Manager (Recruitment & Selection) Myanmar Distribution Group Co., Ltd.(MDG) HR Manager KMA Group of companies HR Manager (Talent Acquisition & Development) SHWE TAUNG REAL ESTATE HR Manager (Zelux Hotel In Yangon) SHWE TAUNG REAL ESTATE HR Admin Manager Nilar Group Of Companies HR Manager At Hlaing Thar Yar Factory Sin Yi Myanmar Real Estate & Trading Co.,Ltd. Head Of HR KMA Group of companies HR Manager ASA Microfinance Co.,Ltd